Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Fedora - LinuxCapable
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Fedora
Wednesday, October 20, 2021 Tọzdee, Ọktoba 14, 2021 by Jọshụa James
Ịgbanwe na Akaụntụ mgbọrọgwụ (su Command)
Mepụta na Akaụntụ Onye ọrụ
Tinye onye ọrụ ọhụrụ na otu Sudoers
Kwenye ma nwalee onye ọrụ Sudo ọhụrụ
Mgbe ị wụnye - Fedora, Akaụntụ onye ọrụ emepụtara n'oge mbido mbụ kwesịrị ịnweta ikike sudo. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe mkpa ịgbakwunye ndị ọrụ sudo ma ọ bụ mee ka onye ọrụ ndabara nwee ikike sudo. Nke a bụ usoro kwụ ọtọ yana iwu ole na ole.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta tinye onye ọrụ na otu sudoers na sistemụ Fedora ọ bụla.
OS akwadoro: Fedora Linux 34/35 (ụdị akwadoro ochie/dị elu ga-arụkwa ọrụ)
Iji mepụta ndị ọrụ sudo ọhụrụ, ị ga-achọ ịgbanwe na mgbọrọgwụ site na iji su iwu. Site na ndabara, edobeghi nke a n'oge nrụnye. Atụla ụjọ, ị nwere ike ịtọgharịa paswọọdụ dịka ndị a.
Na-esote, a ga-akpali gị itinye paswọọdụ gị maka akaụntụ sudo gị, wee kwenye ozugbo, tinye ọhụrụ mgbọrọgwụ paswọọdụ.
Ugbu a edobere okwuntughe mgbọrọgwụ gị, gbanye mgbọrọgwụ site na iji ihe ndị a iwu su:
A ga-akpali gị maka mgbọrọgwụ paswọọdụ. Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ aha njirimara agbanweela ka mgbọrọgwụ.
Dị ka n'elu, ị nwere ugbu a mgbọrọgwụ @ kama nke gị @usiki.
Mbụ, mepụta akaụntụ onye ọrụ , dochie sample na aha njirimara nke ịchọrọ ịgbakwunye.
Ọzọ, ị ga-achọ ịtọ paswọọdụ maka aha njirimara agbakwunyere.
Na nkuzi nkuzi, aha njirimara bụ "josh."
N'akụkụ nkuzi na-esote, ugbu a ị mụtala otu esi etinye onye ọrụ, ị nwere ike ịnye onye ọrụ ọhụrụ ị kpọrọ aha ma ọ bụ aha njirimara sudoers dị adị site na ịpị iwu a:
Ọmụmaatụ iji aha anyị mere:
Jiri ihe ndị a nyere n'iwu ka ịlele ma aha njirimara dị na sudo "wheel" otu.
Nhọrọ ọzọ bụ iji gpasswd iwu dị ka ndị a:
Ugbu a ị gbakwunyela onye ọrụ ịchọrọ ịnweta sudo nke ọma, oge eruola ịnwale akaụntụ ahụ. Enwere ike ime nke a ọzọ site na iji iwu su mana site n'ịgbakwunye aha njirimara yana iwu ahụ.
Banye onye ọrụ sudo dị ka ndị a:
Ugbu a, gosi na aha njirimara na sudo iwu yana whoami:
A ga-akpali gị pịnye aha njirimara sudo ị na-eji yana paswọọdụ ya.
Ozugbo ịbanye na nkwenye, ị ga-ahụ mmepụta na-esonụ:
Ekele, ị gbakwunyela aha njirimara ọhụrụ na otu sudoers.
Ị mụtala otu esi etinye ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ Fedora gị wee tinye ikike sudo na nkuzi. N'ozuzu, nkuzi a kwesịrị ịrụ ọrụ maka ụdị Fedora niile dị ugbu a na-akwado ma na-atụ aro naanị inye ikike nye ndị ọrụ tụkwasịrị obi ka ha ga-enwe ike ịnweta faịlụ ndị nwere mmetụta na ikike nke sudo nyere.
Categories Fedora Tags Sudoers Mail igodo
Otu esi etinye Redis & hazie na AlmaLinux 8
Otu esi etinye MATE Desktop 1.26 na Fedora 35